China Usoro usoro ịghasa ihe nrụpụta na ụlọ nrụpụta | ỊZỤLI-Elec
Klas arụmọrụ nke bootu:
Ogo arụmọrụ bolt nwere akụkụ abụọ nke ọnụọgụ, nke na -anọchite anya ike nkwụsị nke ọnụ ọnụ brọtị na oke nke ihe. Dịka ọmụmaatụ, ihe bolts nwere ọkwa arụmọrụ 4.6 bụ: ọnụọgụ dị na akụkụ nke mbụ (4 n'ime 4.6) bụ 1/100 nke ike ọdụdụ (n / mm2) nke ihe mkpọchi, ya bụ, Fu ≥ 400N / mm2; Ọnụ ọgụgụ dị n'akụkụ nke abụọ (6 n'ime 4.6) bụ ugboro iri nke oke mkpụrụ nke ihe bolt, ya bụ, FY / Fu = 0.6; Ngwaahịa nke ọnụọgụ abụọ (4) × 6 = "24") bụ 1/10 nke oke mkpụrụ mkpụrụ (ma ọ bụ ike ịmị mkpụrụ) (n / mm2) nke ihe mkpọchi, ya bụ, FY ≥ 240n / mm2.
Dị ka nrụpụta nrụpụta siri dị, enwere ike kee bolts nkịtị nke ihe nchara n'ime ọkwa atọ: A, B na CA Grade B bụ mkpọchi a nụchara anụcha, nke a na -ejikarị eme ihe maka ngwa, na ọkwa C bụ mkpọchi siri ike. Ọ gwụla ma akọwapụtara ya n'ụzọ ọzọ, mkpọchi nkịtị nke ihe nchara na -abụkarị mkpọchi ọkwa C nke nwere ọkwa arụmọrụ nke 4.6 ma ọ bụ 4.8.
Nke gara aga: Ọrụ nhazi ngwa ngwa OEM ODM
Osote: Otu nkwụsị ọrụ maka ihe nkedo
Ihe nkedo Aluminom
Ọla kọpa ịghasa
Ihe nkedo emere nke ọma
Nhazi kposara omenala
Ịghasa na kpọchie
Ihe nkedo nke onwe
Ihe nkedo osisi
Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Akụkụ stampụ nke nnukwu, Ọnwụ nkedo Magnesium, Ihe nkedo, Mpempe akwụkwọ ọla zọ ngwaahịa, Aluminum CNC Machined Parts, Mmiri Efere, Ngwaahịa niile